Home News Ammaanka Magaalada Baydhabo oo si weeyn loo adkeeyay
Ammaanka Magaalada Baydhabo oo si weeyn loo adkeeyay
Ammaanka Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa si weyn loo adkeeyay.
Dhammaan wadooyinka Magaalada Baydhabo ayaa xiran, waxaana sidoo kale xiran Kontorooladda laga soo galo Magaalada Baydhabo, mana jirto cid Magaalada soo galeysa.
Xaafaddaha Qaar ee Magaalada ayaa lagu arkaya Ciidamo Itoobiyaan iyo ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo si wadajir ah Ammaanka u ku sugaya.
Doorashadda Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu waddaa in ay maanta ka dhacdo Magaalada Baydhabo.
Previous articleSaraakiil katirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo lagu toogtay Deegaanka Galboole
Next articleMagaalada Baydhabo oo maanta lagu dooran doono Madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed Hogaamin doona
Golaha Wasiirada oo la wareegay shaqadii Baarlamaanka! Sharcigii Hantidhawrka Qaranka oo...
Soomaaliland oo Mar kale Xukun Xabsi ah ku Riday Boqor Buur-madoow